သွားများကို သဘာဝအတိုင်း ဖြူဖွေးစေနိုင်သည့် နည်းလမ်း (၆) မျိုး - Hello Sayarwon
သွားများကို သဘာဝအတိုင်း ဖြူဖွေးစေနိုင်သည့် နည်းလမ်း (၆) မျိုး
Arkar Hein မှ ရေးသားသည်။ 11/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လူတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့သွားအရောင်က အဝါရောင်ပေါက်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ သွားကို ဖုံးထားကြလေ့ရှိပါတယ်။ လှပတဲ့ သွားတွေဟာ ဒီနေ့ခေတ်လို အလှအပရေးရာကို ဦးစားပေးလာကြတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အပြင် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် လူတော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ သွားနဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ပိုမိုစောင့်ရှောက်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သွားတွေဟာ လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ ပထမဆုံး သတိပြုမိခံရတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်အတွက် ပြယုဂ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက အသွင်အပြင်အတွက်ပါ အရေးကြီးတဲ့ သွားတွေကို စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သွားတွေဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ပိုဝါလာနိုင်ဆိုပေမဲ့ သွားနဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို သေချာဂရုစိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီလို သွားဝါခြင်းကို အပြည့်အဝတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ သွားဖြူစေနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကို ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူလို့ရတဲ့အပြင် သဘာဝအတိုင်း ရရှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကလည်း သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel) ပျက်ဆီးခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွားတွေ ဝါရခြင်းဟာ အကြောင်းရင်း နှစ်ချက်ကြောင့် ဝါရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးတစ်ချက်က
(၁) သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel) ပါးလာခြင်း။
သွားတွေရဲ့ အပေါ်ဆုံး အလွှာဟာ သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel) လို့ခေါ်ပြီး သွားရဲ့ အရောင်ကို အဖြူရောင် ဖြစ်စေတဲ့ အရာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် သွားအတွင်းထဲက အစိတ်အပိုင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel) ရဲ့အောက်မှာ ကယ်လ်ဆီယမ်ပါဝင်တဲ့ တစ်ရှုးဖြစ်တဲ့ Dentin ရှိပြီး Dentin ရဲ့ အရောင်ဟာ အဝါရောင် – အညိုရောင်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel) ပါးသွားတဲ့အခါမှာ သွားတွေဟာ ပိုဝါလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel)တွေဟာ အက်ဆစ်များတဲ့အစားအစာတွေ၊ သွားဖုံးရောဂါတွေနဲ့ အသက်အရွယ်ကြောင့် ဝါလာနိုင်ပြီး တစ်ချို့လူတွေကျတော့ သဘာဝအတိုင်းကို သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel) ပါးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) အစွန်းအထင်းများ ။
သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel) နဲ့ သွားအတွင်းပိုင်း အစိတ်ပိုင်းတွေမှာ အစွန်းအထင်းတွေ ဖြစ်သွားခြင်းကြောင့် သွားဝါလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော စားစရာနဲ့ သောက်စရာတွေကလည်း သွားတွေကို အရောင်စွန်းစေနိုင်တဲ့အပြင် သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel) ကိုပါးလာစေနိုင်ပါသေးတယ်။
ကော်ဖီ (သို့) လက်ဖက်ရည်၊
အက်ဆစ်ဓါတ်များတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ အချိုတွေအများအပြားစားသုံးခြင်း တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
သွားတွေကို သဘာဝအတိုင်း ဖြူအောင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။
(၁) အစားအစာ စားသောက်မှု ပုံစံကို ပြောင်းလဲပါ။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ သွားကို အရောင်စွန်းစေတဲ့ အစားအစာတွေ ကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ပါပဲ။ ဝိုင်နဲ့ လက်ဖက်ရည်တွေမှာပါဝင်တဲ့ Tannins ဓါတ်ပေါင်းဟာ သွားကို အရောင်စွန်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကော်ဖီ၊ ဆိုဒါတွေနဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေကလည်း သွားတွေကို အရောင်စွန်းစေနိုင်ပါတယ်။ အက်ဆစ်များတဲ့ အစားအစာတွေကလည်း သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel) ကိုပါးစေနိုင်တဲ့အတွက် သွားပိုဝါလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွားဝါနေတဲ့ လူတွေ အနေဖြင့် ဒီလို ရှောက်မျိုးနွယ်အသီးတွေ၊ ကော်ဖီနဲ့ ဆိုဒါတို့ စားသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို အစားအစာတွေ စားသုံးပြီးတဲ့ အခါမှာလည်း ပလုတ်ကျင်းပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို အစားအစာတွေ စားသုံးပြီးပြီးခြင်းမှာတော့ သွားချက်ခြင်း မတိုက်သင့်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အက်ဆစ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေဟာ သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel) ကို အားနည်းစေပြီး အဲ့အချိန်မှာ သွားတိုက်ရင် သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ (enamel)တွေပိုပါးသွားနိုင်တဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သွားတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ ခန့်စောင့်ပြီးမှ သွားတိုက်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆေးလိပ်နဲ့ ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းတွေကလည်း နီကိုတင်း အစွန်းတွေကို ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် သွားဝါနေတဲ့လူတွေဆိုရင် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အကျင့်ကို ဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ အကျင့်ကို ဖြတ်ခြင်းဖြင့် သွားပျက်စီးခြင်းနဲ့ သွားဖုံးရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်မှာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဆီဖြင့် ပလုတ်ကျင်းပေးခြင်း။ (Oil pulling)
ဒီနည်းလမ်းဟာ ရှေးကတည်းက ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး သဘာဝထွက်အဆီများနဲ့ ၅ မိနစ်ခန့် ပလုတ်ကျင်းပေးတဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သွားကို သန့်ရှင်းစေရုံသာမက ခံတွင်းကျန်းမာရေး အတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ ပုံမှန် သွားတိုက်ခြင်းကို အစားထိုးလို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတော့မဟုတ်ပေမဲ့ လေ့လာချက်တစ်ချို့က သွားကို ဆီဖြင့် ပလုတ်ကျင်းပေးခြင်းက သွားကို ဖြူစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားကြပါတယ်။ သွားကို ဆီဖြင့် ဆေးရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဆီတွေကတော့ အုန်းဆီ၊ နေကြာဆီ၊ နှမ်းဆီ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီဖြင့် ပလုတ်ကျင်းရမယ့်အချိန်ကတော့ သွားတိုက်ပြီး လုပ်ရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ထဲ ဆီထည့်ကာ မိနစ် အနည်းငယ်ခန့် ပလုတ်ကျင်းပေးပြီး ထွေးထုတ်ရုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မုန့်ဖုတ် ဆိုဒါဖြင့် သွားတိုက်ပေးခြင်း။
မုန့်ဖုန်ဆိုဒါ (sodium bicarbonate) ဟာ သွားပေါ်မှ အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများက မုန့်ဖုန်ဆိုဒါ (sodium bicarbonate) ဟာ သွားများကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကလေ့လာချက်တစ်ခုအရ မုန့်ဖုန်ဆိုဒါ (sodium bicarbonate) ဟာ သွားပေါ်က အစွန်းအထင်းများကို ဘာထိခိုက်မှုမှ မရှိစေဘဲ ဖယ်ရှားနိုင်ကြောင်းတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ Dentistry ဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာချက်တစ်ခုမှာ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ (sodium bicarbonate) သွားတိုက်ပေးခြင်းဟာ သွားချိုးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီး မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ (sodium bicarbonate) တွေဟာ ဘတ်တီးရီးယားတွေနဲ့ သွားချိုးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ရုံသာမကဘဲ သွားပျက်စီးခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ Hydrogen peroxide ကို အသုံးပြုပါ။
Hydrogen peroxide ဟာ သွားအရောင်စွန်းခြင်းကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ အားပျော့တဲ့ အစွန်းချွတ်ဆေး ဖြစ်ပြီး သွားအကောင်းဆုံး ဖြူစေဖို့ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ Hydrogen peroxide ကို အသုံးပြုပြီး တစ်ပတ်ကို တစ်ခါ သွားတိုက်သင့်ပါတယ်။ Hydrogen peroxide ဟာ သွားအထဲက ဘတ်တီးရီးယားတွေကို သတ်ပစ်နိုင်ပြီး ဓါတု သွားဖြူဆေးတွေမှာလည်း Hydrogen peroxide ပါဝင်နေပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနဲ့ Hydrogen peroxide ၁ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့ သွားတိုက်ဆေးတွေဟာ သွားကို သိသိသာသာ ဖြူလာစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Hydrogen peroxide ကို ရေများများရောပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကိစ္စမရှိပေမဲ့ Hydrogen peroxide ပြင်းအားများနေမယ်ဆိုရင် သွားဖုံးယားယံခြင်းနဲ့ သွားကျင်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနည်းလမ်းဟာ ခဏခဏ လုပ်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ဘဲ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါခန့်သာ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Hydrogen peroxide ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ပလုတ်ကျင်းဆေး အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အသုံးပြုတဲ့အခါ အားပျော့သွားအောင် အမြဲတမ်းရေရောဖို့လိုပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဆေးဆိုင်တွေမှာ ရောင်းနေကြတဲ့ Hydrogen peroxide တွေဟာ ၃ ရာခိုင်နှုန်း အရည်တွေ ဖြစ်ပြီး ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်အောင် ရေနဲ့ ဆတူရောပြီး ပလုတ်ကျင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကတော့ မုန့်ဖုန်ဆိုဒါနဲ့ Hydrogen peroxide ကိုရောပြီး သွားတိုက်ဆေးကဲ့သို့ သွားတိုက်ဖို့ပါ။ သွားတိုက်မယ်ဆိုရင် Hydrogen peroxide ၂ ဇွန်းနဲ့ မုန့်ဖုန်ဆိုဒါ ၁ ဇွန်းကို ရောပြီးသွားတိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အထက်က ပြောသလို အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ တိုက်နေရင် သွားအပေါ်ယံကြွေလွှာ ပျက်ဆီးနိုင်တာကြောင့် တစ်ပတ်မှာ တစ်ခါ ခန့်သာ တိုက်သင့်ပါတယ်။
နာနတ်သီးမှာ ပါဝင်တဲ့ Bromelain အင်ဇိုင်းနဲ့ သင်္ဘောသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ Papain အင်ဇိုင်းတို့ဟာ သွားများကို ဖြူဖွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကလေ့လာချက်အရ ဒီအင်ဇိုင်း ၂ မျိုးမှာ သွားကို ဖြူစေနိုင်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ နာနတ်သီးမှာပါဝင်တဲ့ Bromelain အင်ဇိုင်းဟာ သွားအပေါ်ယံက အစွန်းများကို ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် သွားချိုးတက်ခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်္ဘောသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ papain အင်ဇိုင်းကလည်း သွားအစွန်းတွေကို ချွတ်ပေးနိုင်ပြီး papain အင်ဇိုင်းဟာ သင်္ဘောသီး အမှည့်တွေထက် အစိမ်းတွေမှာ ပိုများပါတယ်။
၆။ ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ခြင်း။
ဒီနည်းလမ်းကတော့ သွားဝါခြင်းကို ကာကွယ်ချင်တဲ့ လူတွေအနေနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခံတွင်းကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေကတော့ သွားပုံမှန်တိုက်ခြင်းနဲ့ dental floss (သွားသန့်ရှင်းရသော ကြိုးမျှင်တို့ဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်း ) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားတိုက်တာကတော့ အားလုံးသိပြီးသားမို့ ဒီဆောင်းပါးမှာ flossing အကြောင်းကိုပဲ ရှင်းပြသွားပါ့မယ်။ flossing ဆိုတာ သွားတိုက်တံ အလွယ်တကူ မရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေက သွားချိုးတွေနဲ့ အစားအစာ အကြွင်းအကျန်တွေကို သန့်ရှင်းရတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သွားတိုက်တံတွေ အနေနဲ့ သွားဖုံးနဲ့ သွားနှစ်ခုကြားက နေရာတွေကို မရောက်နိုင်ကြဘဲ ကြာရင် ဒီလို သွားချိုးတွေက သွားကို ပျက်ဆီးစေနိုင်တဲ့အပြင် ခံတွင်းရောဂါတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ flossing က အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ flossing လုပ်ဖို့ အတွက် ပထမဆုံးဆုံး ၁၈ လက်မခန့်ရှိတဲ့ ကြိုးမျှင်ရှိဖို့လိုပြီး လက်ခလယ် ၂ ချောင်းမှာ အစွန်း ၂ ဖက်ကို ချည်ထားကာ သွားရဲ့ကြားအတွင်းက နေရာတွေကို ပျော့ပြောင်းစွာ အထက်နဲ့ အောက် သန့်ရှင်းရတဲ့ နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ သွားသန့်ရှင်းကြိုးမျှင်နဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ အခါ အားသုံးမိရင် သွားဖုံးတစ်ရှုးတွေကို ဒဏ်ရာရစေနိုင်တဲ့အတွက် ပျော့ပြောင်းစွာ အသုံးပြုဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင်တစ်ခြားသောခံတွင်း သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ နည်းလမ်းတွေကတော့-
တစ်နေ့ ၂ ကြိမ် သွားတိုက်ခြင်း (သွားဖုံးနဲ့ သွားနောက်ဖက်ကိုလည်း သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။)
ဖရိုရိုဒ် ပါဝင်သော သွားတိုက်ဆေးကို အသုံးပြုခြင်း ( ဖလိုရိုဒ်ဟာ သွားပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ )
သွားကြားက သွားချိုးတွေကို သွားသန့်ရှင်း ကြိုးမျှင် အသုံးပြုပြီး သန့်ရှင်းခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကတော့ သံပုရာ၊ လိမ္မော်နဲ့ ပန်းသီးမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ ရှာလကာရည်တွေ၊ မီးသွေးတွေနဲ့ သွားသန့်ရှင်းတာမျိုးကို မလုပ်ဆောင်သင့်ပါဘူး။။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူအနည်းငယ်ကသာ သဘာဝအတိုင်း သွားဖြူဖွေးနေကြတာပါ။ သွားဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ ပိုဝါလာနိုင်တဲ့ အတွက် ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ သွားကျန်းမာရေးကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းတို့က သွားတွေကို တောက်ပနေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သွားဝါခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ပြဿနာ မဟုတ်ပေမဲ့ သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြသခြင်းက ကြွေသွား ပွန်းခြင်းတွေနဲ့ သွားပျက်ဆီးခြင်းတွေကို စစ်ဆေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါ နည်းလမ်းတွေဟာ အိမ်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပြီး သွားဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသမယ်ဆိုရင် အခြားသော သွားဖြူနည်းစနစ်တွေနဲ့ ကုသနိုင်ဦးမှာပါ။
Accessed (15. July. 2018)
11 Science-Backed Ways to Naturally Whiten Your Teeth
သင့်သွားများကို ပျက်စီးစေသော အမူအကျင့်များ
သွားကိုက်ဝေဒနာ သက်သာစေမယ့်နည်းလမ်း (၅) ခု